आइमाई साथी – सुशीलराज रेग्मी | आजको खबर, आजै अनि ताजै... Popular News Portal from Nepal, Today's News, Political News, Sports, Economics, Business, Education, Tourism, Literature, Entertainment, Music, Video, Cinema, Movies, आजको खबर, आजै अनि ताजै... Popular News Portal from Nepal, Today's News, Political News, Sports, Economics, Business, Education, Tourism, Literature, Entertainment, Music, Video, Cinema, Movies,
२०७४ फाल्गुन २९, मंगलबार ०३:३२ pm | आजको पत्रिका
मार्च ८ तारिख, अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस । सामाजिक संजालहरू यस्तै आख्यान ब्याख्यानले छताछुल्ल छन् । सूचना र संचारको दुनियामा हामी भने रेडियो नेपालको जमानाका मान्छे । देशको दुरदाराजमा जन्मे, हुर्केका; हामीजस्ताहरूका लाई ‘यो रेडियो नेपाल हो, अब सुन्नुहोस् कोमल वलीबाट समाचार‘ भन्ने सुनेपछि देशमा कहाँ के-के भएछन् भनेर कान ठाडो पार्नु पर्ने बाध्यता थियो । जीवनले फड्को मारोस् नमारोस् जमानाले निकै फड्को मार्यो । हात-हातमा मोबाईल फोन र इन्टरनेटले दुनिया साँघुरो बन्दै गयो । दुनिया भरको खबर तत्काल जनताका घर दैलोमा पुग्न थाले । फेसबुक, ट्वीटर लगायतका सामाजिक संजालहरू बने । संचारको जगतमा एउटा नयाँ युगको उदय भयो ।
फेसबुक र ट्वीटरका वालहरू हुँदै गुज्रिंदा मैले आफ्नो निजी जीवनसँग सरोकार राख्ने केही महिलाहरूको स्मरण गरें । मानिसको स्वभाव हरेक कुरालाई स्व केन्द्रीत गरेर हेर्छ । निर्वाध म पनि यही भीड भित्रको एक मानिस । स्मृतीमा केही युवतीहरू आए । कोहीसँग सुन्दर बालापन बितेको थियो, कोहीसँग सित युद्ध चलेको थियो, बैरभाव भएको थियो र केही मेरो प्रेरणाको स्रोत समेत बनेका थिए, जसको बदौलत म आज यहाँसम्म छु ।
जिन्दगीको दौडमा जति पर पुगे पनि स्मृतिमा सर्वप्रथम त बाल्यकाल नै आउँछ । र आउँछन् स्मृतिमा उनै बाल सखाहरू । बाल्यकालमा उसो त भौतिक आकर्षण, रूप र लिङ्गले खासै ठुलो माईने राख्दैन किनकी त्यहाँ मित्रता नै सबैभन्दा महान कडी हुन्छ जसले एक अर्कालाई गोलबद्ध पारेको हुन्छ । जहाँ जात, जाति, धर्म, भाषा आर्थिक हैसियत भन्दा पनि मित्रता प्रगाढ हुन्छ । जात, धर्म, भाषा, आर्थिक हैसियत त सबै कथित विद्वान र बुज्रुकहरूले आफूलाई भिन्न र उचो देखाउन खिचिएका लकीर मात्र हुन् । मेरा बच्पनका साथीहरूमा केही केटी साथीहरू पनि थिए ।
एक दिनको कुरो हो, बाख्राको बथानलाई पर बाँजो खेतमा चर्न धपाएपछि हामी जमुनाको फेदमा राजा-रानी खेल्न थाल्यौ । माटाका डल्ला माथि धानका ठुटी उखेलेर राजाको विछ्यौना बनायौँ, तिनै माटाका डल्लाले सोफा र कुर्सी बनायौँ, अडरीका छेस्काले भाला तरवार बनायौँ, कसैलाई मन्त्री बनायौँ, कसैलाई दरबारीया बनायौँ, कसैलाई पहरेदार त कसैलाई सेनापती बनायौँ । राम हामी भन्दा १-२ कक्षा सिनियर र शारीरिक हिसाबले बलिस्ट भएकाले राजा पदको एकलौटी दाबेदार उही भयो । अर्को बलिस्ट अर्जुन सेनापति भयो यसरी आ-आफ्नो ओहोदाको सपथ ग्रहण गर्यौ । केटी साथीहरूमा राधा सबै भन्दा राम्री, गोरी सल्काईली, पुक्क गाला भएकी निकै सुन्दर थिई । राजा (राम) ले राधा र सीतालाई खेल अवधि भरी नाम साटासाट गर्ने सल्लाह दियो तर, नाई के नाम साट्न नपाई ! भनेर राधाले घुमाउरो पारामा रानी हुन ईन्कार गरी, मैले हँ मा हँ मिलाएँ । सँगै रहेको मन्त्री (कृष्ण) लाई नाम फेर्न नपाई भन्न उक्साए । सोझी पातली सीता नै राम की रानी सीता हुने पक्का भयो । राधा र म मुखा मुख गर्यौ । उ मुसुक्क हाँसेर शीर निहुराई । सबै आ-आफ्नो ज़िम्मेवारीमा लाग्यौँ ।
भान्से खाना बनाउन लागे, सुसारेहरू राजा रानीको सुसार गर्न लागे । सेनापति सैन्य तालिममा लाग्यो । यसरी राजपाठ सूचारू भयो । बिहान भएको घोषणाबाट सुरू भएको राज पाठ, सन्ध्या भएको घोषणासम्म पुग्यो । राज्यको सीमा भित्र सबैलाई आ-आफ्नो घरजम गर्न आदेश भयो । मन मिल्नेहरूका घर जोडिएर बने । मैले पनि आफ्नो लौरो र चप्पलले घेरा हालेर घरको जोहो गरें । मेरो लौरोसँगै राधाले आफ्नो लौरो जोडेर घेरा फराकिलो पारी र चप्पलले गेट बनाई । अब घर, बाउन्डरी सहितको भयो । यसरी राधा रानी हुनु भन्दा मेरो घरबारे हुनुमा खुसी भएको देखेर म लज्जित र रोमान्चित दुबै भएँ ।
यसरी मेरो लौरीको घेरो भित्र राधाको प्रवेश नै मेरो जीवनमा आइमाई साथीको औपचारिक सुरूवात थियो । त्यसबखत म आफूलाई अरू भन्दा विशेष र भाग्यमानी ठानेको थिएँ ।
सन्ध्याकालको घोषणासँगै दरबारमा रात्री भोजको आयोजना गरियो । नाच-गान भयो । राम्रो नाच्नेहरूलाई राजाले बक्सिस पनि दिए । नाच गान सकिएर शान्त भएपछि राजा भएको रामेले घोषणा गर्यो... अब राजा-रानी सुत्छन् तिमीहरू पनि सुत । सबै आ-आफ्नो लौरोको घेरा तिर लाग्यौं ।
मेरो लौरोको सीमाभित्र राधा र म सुतेझैं गर्यौ । मैले पूर्व मुख गरें उ पश्चिम मुख गरी, यद्धपि जीउ जोडिएकै थियो । मध्य दिनलाई रात्री घोषणा गर्दैमा के निद्रा पर्थ्यो र, म आँखा बन्द गरेर मनमा नाना तर्कना खेलाउदै थिएँ र सायद राधा पनि । सोच्दै थिएँ, भोलि दरबारमा कुरा उठाउनु पर्छ, अब राज्यको सीमा विस्तार गर्नु पर्छ ।
यस्तैमा द्वारपाल बनेको शिव दौडदै आयो, माहाराज, माहाराज अत्यन्त जरूरी खबर । द्वारपाल शिवको हस्याङ्ग फस्याङ्गको आवाजले मेरो निदाएको अभिनय भङ्ग भो । राजाले आपतकालीन बैठक बोलाए, सबैलाई आ-आफ्नो हात हतियार लिएर रेडी हुन आदेश भयो । राधा हाम्रो लौरी र चप्पल बोकेर मेरो छेउमै उभिई । सेनापतीको कानाखुसीपछि राजाले देशमा संकट परेको घोषणा गर्यो ।
केही पर हरीयो गहुँ बारी तीर ईशारा गर्दै अर्जुन (सेनापती) ले आक्रमण भन्यो । हामी आफ्नो लौरो र चप्पल लिएर बेतोड कुद्यौ । (केही पर छिमेकीको हरियो गहुँमा हाम्रा बाख्रा निर्मम चरिरहेका थिए)
यसरी राधा मेरो जीवनकी पहिलो आइमाई साथी बनी । त्यसपछि स्कुल, कलेज, विश्वविध्यालय, हाजिरीजवाफ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, हुँदै जीवनको लामो यात्रामा भेटिएका कैयन आइमाई साथीहरूलाई नमन र अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको शुभकामना भन्न चाहन्छु । जीन्दगी उही हो तर जीवन शैली के सारो फेरिएझैं लाग्छ । बच्पनका ती सबै कुरा अहिले एकादेशको कथाजस्तो भएको छ । यी फेसबुक र ट्वीटरका भित्तामा त्यो राजा-रानी खेल कहाँ भेटिन्छ होला ? मेरी राधा के गर्दै छ होली ? म नोस्टाल्जिक भएँ ।
मुहारपुस्तिकाको सर्च बक्समा केही प्रोफाईल र नामहरू खोजी हेरेँ । कैयौ त भर्चुअल दुनिया (सामाजिक संजाल) मा समेत मित्रता तोडेर नयाँ जुग जिईरहेका रहेछन् । ब्लक गर्नेहरूको प्रोफाईल समेत हेर्न नमिल्दो रहेछ । कस्तो अचम्म सामाजिक संजाल मै पनी शत्रूता । उज्यालो-अध्यारो, सत्य-असत्य, मित्रता-शत्रुता, सन्तोष-बैराग्य यी सधैँ साथ रहन्छन्, एक सिक्काका दुई पाटा झैँ । जब पाटो फेरिन्छ, उज्यालो अध्यारो भइदिन्छ, मित्रता वैमनस्यता भइदिन्छ । हर चीज सृष्टिमा जोडी भएर आउछन् । बिजोडी त सायद केही अज्ञातहरू मात्र हुन्छन् जो की एकल अस्तित्वको हैसियत राख्दछन् ।
केही बेर स्मृतीमा कैयौं महिला आए । समाजका शिक्षित, सुन्दर, उद्यमी, ब्यापारी, होनाहार, कुलंगार, जसप्रति समाज झुकेका, जसलाई समाजले थुकेका अनेक नारी स्मृती मानसपटलमा दौडिए । कसैलाई देखेर डाहा लाग्दो, कसैलाई देखेर दया लाग्दो । हरेकलाई एक अलग पुस्तक झैँ लाग्यो, नारीका अनेकन रूपहरू, अनेकन जिम्मेवारीहरू, अनेकन भूमिकाहरू । एकै युगमा एउटी नारी, छोरी, बुहारी, श्रीमती, आमा, दिदी, अनेक भूमिकामा आफूलाई प्रस्तुत गरेर पनि समाजमा हर भूमिका अब्बल तरिकाले निर्वाह गर्छे, मनैदेखि एक पटक “जय नारी" भन्न मन लाग्यो ।
बनाउनेवाला भन्दा बनेको चिज कहिल्यै माहान हुँदैन, यो धर्तिमा नर यानी पुरूष नारी कै देन हो । यावत जीवात्माहरू उनै महान आमाका देन हुन् जसले सिङ्गो सृष्टिको अभिभारा आफ्नो शिरमाथि लियो । स्मरण रहोस् उनै आमा, जो पहिले एक नारी हुन् । मान्छे बाटो बिर्सेर लक्ष्य प्राप्ति नगर्ने होइन, बरू गन्तब्य बिर्सेर लक्ष्य प्राप्ति नगर्ने हो । स्मृतीमा केहीबेर परस्त्री आए भन्दैमा, मेरो जीवन की एक मात्र आदर्श नारी, एक महान आत्मा, मेरो संरक्षक, मेरो मित्र, मेरो शुभ चिन्तक मेरी आमालाई म कसरी बिर्सन सकुँला ? पंक्षीले बचेरालाई चारो खुवाएको देखेर रसाउने मेरा आँखा, मेरी आमाले मेलाबाट मेरा लागि बचाई ल्याएको मकै भटमास् सम्झेर कैयौं पटक छल्किएका छन् ।
तारे होटलमा खाएर सुकमेलको गन्ध मात्र बोकी रित्तो हात घर आउने बाबु र दाउराको भारी बोकेरै पनि जंगली फलफूल बोकेर आउने मेरी आमाको तुलना कदापि हुनै सक्दैन । मानिसलाई भीड भन्दा अलग बनाउने उसैको कर्मले हो । नारी र पुरूष बीच यस्ता कैयन उदाहरण छन्, जसले नारीलाई आइमाईबाट आमा बनाइदियो र आमाको तुलना त स्वयम् भगवानसँग पनि हुन सक्दैन ।
“यत्र नारयस्तु पुजयन्ते रमन्ते तत्र देवता"
अर्थात, जहाँ नारीको पूजा हुन्छ त्यहाँ देवताको बास हुन्छ । तर यथार्थ, फुलेजति फल्दैन । नारी हकहीतका लागि आजीवन लागेका पुरूषहरू सडकमा न्याय र समानताका चर्को नारा लाउँछन् तर घरमा तरकारीमा नुन चर्को भयो भने श्रीमती कुट्न तम्सिन्छन् । साँची भन्नु पर्दा, जहाँ नारीमाथि अत्याचार हुन्छ त्यहाँ सत्यानास हुन्छ । महिला हिंसा र दमन भएको घरको उन्नती नभएका कैयौं उदाहरण हाम्रा टोल छिमेकमा प्रसस्तै छन् । वृक्षको पात हरियो पार्नु छ भने त्यसको जरामा पानी हाल्नु पर्छ, जरा मै मलजल गर्नु पर्छ, नारी परिवारको जड हो, समाजको सभ्यताको जरा हो, जबसम्म जरामा मल, पानी पुग्दैन तबसम्म वृक्ष हरियो हुनै सक्तैन । यो पुरूषवादी समाज सधैँ पातमा पानी हालेर सिंगो वृक्ष हराभरा पार्ने प्रयास सदियौदेखि गर्दै आयो र सधैं असक्षम रह्यो । हर नारी कारुणिक हुन्छन्, पुरूषको तुलनामा बढी सहनशील र सम्वेदनशील हुन्छन् किनकी हरेक नारीभित्र कतै न कतै आमा लुकेकी हुन्छन् ।
एकादेशमा एउटा बाघ बघिनी थिए उनीहरूसँगै उनीहरूको डमरू (बाघको बच्चा) पनि थियो । सिकारको खोजीमा बाघ बघिनी कही दुरदुर तक भौतारिनु पर्थ्यो, एकदिनको कुरा हो जब सिकारको खोजीमा उनीहरू टाढा पुगे तब केही थान मृगहरू चरिरहेको देखे तर बिडम्बना बीचमा एक नदी थियो । सिकारसम्म पुग्नको लागि त्यो नदी पार गर्नु पर्थ्यो, बार बारको प्रयासमा पनि डमरू त्यो नदी पार गर्न असमर्थ हुन्छ । साँगुरो गल्छी खोजेर बघिनी आफू फड्केर देखाउँछे, बघिनीको कैयन प्रयास असफल भएको देखेर बाघ क्रोधित हुन्छ, उसलाई आफ्नै सन्तान माथि शंका लाग्छ अन्तमा बाघले पन्जा हानेर डमुरूको हत्या गर्छ र सिकारको लागि अघि बढ्छ ।
हो यस्तै हुन्छ पुरूष, जहाँ ममता भन्दा अहंकार हाबी हुन्छ । आफ्नो सानसौकत र रवाफका लागि उ सन्तानलाई त्याग्न पनि सक्छ, श्रीमतीलाई जीउदै चितामा जलाउन पनि सक्छ, दाइजोका नाममा, अशिक्षाका नाउमा, रूपका नाउँमा अनेकन अत्याचार गर्न सक्छ, किनकी उ पुरूष हो, समाजको कथित बाघ प्राणी हो । उ आफ्नो अहंकारमा ठेस पुग्ने हर चीजलाई पन्जा मारेर अघि बढ्न सक्छ ।
समयसँगै सम्बन्धहरूमा पनि आधुनिकता आउँदै गयो । सँगै राजा रानी खेलेका राधा, सिता र भुन्टीहरू आमा बनिसके । म यहाँ सम्पन्नताको खोजीमा अझै मुग्लान भौतारिदैछु । अभावमा पैसा सबथोक हो जस्तो लाग्थ्यो भने सम्पन्नतामा जीवन नीरस लाग्दो रहेछ । बच्पन सम्झन्छु जति बेला त्यो गाउँ-गाउँ नभएर एक परिवार जस्तो थियो । कसैका घरमा मिठो चोखो पाकेका दिन सबैले स्वाद पाउथे । गाउँ भरीका मान्छेलाई एउटा साधा टीभीले एक ढिका पार्न सक्थ्यो । घाँस, दाउरा, मेला-पात, अर्म-पर्म, मर्दा-पर्दा कहिल्यै कसैले गाह्रो साह्रो महसुस गर्नु परेन । श्रीमानहरू अरब र बम्बैका लाहुरे हुन हिंडे पनि आइमाईले सारा घर धानेका हुन्थे । मानिसहरू नङ-मासु जस्ता थिए । निधारमा पसिनाको नदी बगे पनि ओठ हँसिला हुन्थे । पैसाले खुसी दिन्छ भन्ने भ्रम मेरो मनबाट हट्यो । मलाई पनि एउटी असल आइमाई साथी भइदिए हुन्थ्यो झैं लाग्न थाल्यो । राजा-रानी खेलदेखि विश्वविद्यालयसम्मको यात्रामा कैयौ साथी-सङ्गी बने जसमा केटी साथीहरू पनि थिए तर अफसोच अंग्रेजीमा भनिने “गर्ल फ्रेन्ड” भन्न मिल्ने कोही थिएनन् । चेतन भगतको भाषामा सायद 'हाल्फ गर्ल फ्रेन्ड' सम्म रहे हुनन् । समय बदलियो, न समय उस्तै रह्यो न सम्बन्ध न त युवती नै ।
संगीताको अर्ध नग्न फोटो मुहारपुस्तिकामा देख्दा, संगीता पेट मै छँदा संगीताकी आमा मालती, करीब १० बजे राती जेठी छोरी सम्झना च्यापेर रूदै रूदै हाम्रो घरमा आएको अझै याद आउँछ । संगीताका बाबु अर्थात मालतीका श्रीमान बम्बैको लाहुरे थिए । वर्षमा एकाध पटक घर आउँथे । बम्बै नछिर्दैदेखि रक्सीको लत लागेको वीरमान बम्बै आउने जाने गर्न थालेदेखि रक्सीको नशामा गाउँमा स-सानो कुरामै पनि निहुँ निकाल्थ्यो र हिन्दी मिसिएको लवजमा नाना थरी गाली गर्थ्यो ।
एक दिनको कुरा, मंसीरको चटारो धान पाकेर खुर्मुरीन आटिसकेकोले गाउँमा अर्मपर्मको चापाचाप थियो । मै हुँ भन्नेहरू पनि दिनभर खेतबारी मै भेटिन्थे । दिनभरी कामले थाकेको जीउ उसै माथि दुई जीउकी आइमाई, जेठी छोरी सम्झनालाई खान दिई श्रीमानको बाटो कुर्दै बसिन् । मेलाको थकान र भोकले चक्कर आउला झैं भयो । निकै अबेरसम्म पनि वीरमान नआएपछि मालती चिसो भात तीउन खाएर मजेरीमा पल्टिइन् । थाकेको शरीर दुई जीउकी आइमाई कति बेला निधाई पत्तै भएन । गाउँ सुनसान भइसकेको थियो वीरमानको लात्ती उसको दैलोमा बज्र्यो । ढोका खोल ए नकचरी । वीरमान जाँडको तालमा बहुलाउन थाल्यो । त्यो जमाना अर्कै थियो भन्नु पर्छ । श्रीमानले नखाएसम्म श्रीमतीले खानु हुदैनथ्यो । तर मालती दिनभरी कामले थाकेको जीउ अनि दुई जीउकी मान्छे कतिन्जेल भोक भोकै बसोस् । श्रीमानलाई नकुरी एक्लै खाइस् नकचरी भन्दै वीरमानले मालती माथि पनि लात्ती वर्षायो । जीउमा चोट खाँदासम्म सहेकी मालती कोखमा लात्ती लागेपछि रनमा परी । चेत खुलेपछि दगुर्दै हाम्रो घर शरण लिन पुगेकी थिइन् । हाम्री आमाको हौसला र ढाडसले मालतीले गालासम्मै बगेका आँशु पुछिन् र भनिन् "अबको सन्तान छोरो भइदिए पनि मन बुझाउने बाटो हुन्थ्यो । छोरीका राण तरूनी भएपछि लोग्नेका घर जान्छन्, म अभागीलाई सधैंको दु:ख ।"
यसरी मालतीले आफ्नो आशाको केन्द्र गर्भको सन्तानलाई बनाइन् । दैवको खेल त्यो गर्भको सन्तान संगीता भएर जन्मी । केही वर्षपछि तेस्रो सन्तान छोरो दिएर वीरमान परलोक गयो । भन्छन्, बम्बैको रोग लागेर मर्यो पापी । सायद बम्बैको रोग भनेर एड्सलाई भनिएको होला । वीरमानको मृत्युपछि मालतीको जीवनमा सन्तोषका दिन आए । मेरी आमाले वर्षौंपछि त्यस रातको घटनालाई यसरी म सामु पोख्नुभयो । आमा भन्नुहुन्थ्यो, "नरों मालती यी सन्तानको मुख हेरेर मन बुझा एकदिन तेरा पनि दिन आउँछन् ।" नभन्दै भनेजस्तै भयो । मालतीको छोरो अहिले बैंकमा जागिरे छ ।
मेरी आमाको जीवनबाट मैले अथाहा ज्ञान पाएको छु, अदम्य साहस र सहनशीलता पाएको छु । विज्ञानको भनाईअनुसार मानिस ९ डेसिमलको पिडा सहन गर्न सक्दैन र मर्छ । तर संसारका हरेक आमाहरू १२ डेसिमलको प्रशव पीडा सहेर सन्तानलाई जन्म दिन्छिन् अनि सन्तानको पालन पोषणका लागी आफू जिउदो रहेर विज्ञानलाई चुनौती पनि । यसरी नारीले सहनशीलताको उदाहरण कदम कदममा दिई रहन्छन् । मेरो देश यस्ता आमाहरूको देश हो जहाँ श्रीमानको स्वर्गारोहणसँगै जिउदै चिता माथि बसेर सती गए । संसारको कुन भूगोलले यो इतिहास बोक्न सक्छ जहाँ जिउदो मान्छे एक बेहुलीको भेषमा मृत श्रीमानसँगै जल्न सकोस् । सम्झदा पनि कहाली लागेर आउँछ । यस्ता अद्म्य साहास भएका आइमाई साथी पाउने पुरूषहरूले कीर्तिमान कायम गर्न सक्नुपर्थ्यो । यो देश संसार कै धनी र विकसित देश हुनु पर्थ्यो तर अपसोच यस्तो हुन सकेन । यो देशले नारी साहस र सहनशीलताको गलत फाइदा उठायो, नारीलाई साधन बनाएर सफलताको पगरी सधैं आफूँले गुत्यो ।
सुखमा साझेदारी गर्नेहरू हजार भेटिन्छन्, असल साथी भनेको त दु:ख मा भागिदार हुन सक्नु पर्छ । साउनको झरी होस् वा वैशाखको गर्मी आमाले बाबाको हर दुखमा साथ दिनु भयो । यस अर्थमा म मेरा बाबुलाई भाग्यमानी ठान्छु जसले मेरी आमा जस्तो आइमाई साथी पाउनु भयो ।
अतित र भविष्यको दोसाँधमा म लामो सास फेर्छु । स-सानो कुरामा डिभोर्स दिन तम्सने आजका जोडीहरूलाई मालतीको कथा एक अदम्य साहस र गौरवको प्रतीक हुन सक्छ । के आजको युगमा, राधाजस्ती मायालु र मालतीजस्ता सहनशील आइमाई साथी भेटिन्छ ! म गम्भीर हुन्छु ।
हाल : दक्षिण कोरिया